Digital Marketing – Digital Parmaukkha
Digital Marketing မှာ ဘာကြောင့် Strategy ရှိသင့်တာလဲ ?
Digital Marketing လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Digital Tools တွေကို အသုံးပြုတတ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ Brand ပေါ်မူတည်ပြီး Strategy တွေလည်း ထားရှိဖို့ လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဖြင့် Digital Marketing မှာ ဘာလို့ READ MORE
Content Marketing ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားများ
Content Marketing ဆိုတာဘာလဲ? Content Marketing ကို အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Information တွေ၊ Product & Service အကြောင်းတွေ (အထူးသဖြင့် ကိုယ့် Customer တွေကို သိစေချင်တဲ့ READ MORE